Ihe kachasị mma Amazon na-enye maka taa (18-01-2018) | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nọ na Jenụwarị, ọnwa kachasị mma nke ahịa, ahịa anyị nwere ike ịchọta ma n'ụlọ ahịa ọdịnala, dịka ebe a na-azụ ahịa na n'ezie site n'Ịntanet, Amazon bụ otu n'ime ndị isi na-akwado ya. Couplebọchị ole na ole gara aga anyị gwara gị maka onyinye nke Jeff Bezos na-enye anyị site na Amazon maka oge na nkeji pere mpe.
Ọzọkwa anyị na-egosi ụfọdụ n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị nke nnukwu e-commerce Amazon na-enye anyị maka taa, na-enye nke ahụ, dịka ọ dị n'isiokwu bu ụzọ, anyị nwere ike ịchọta na obere oke na oge, ebe ọ bụ na ha na-agwụ na 12 n'abalị, oge Spanish. N'okpuru ebe anyị na-egosi gị ihe ndị kachasị adọrọ mmasị site na Amazon maka taa.
1 Yi 4k igwefoto
2 Lenovo Ideapad Y520 laptọọpụ
3 Enkeeo 1080p untingchụ nta igwefoto
4 IMuto Mpụga Batrị
Yi 4k igwefoto
Igwefoto a na-enye anyị ihuenyo mmetụ LCD nke 2,19-inch, na mkpebi HD, oghere nke f / 2,8 na oghere 155-wide wide angle. Ọ na-enye anyị ohere ịdekọ vidiyo nke ụdị ọ bụla, ọ bụghị naanị ihe, na mkpebi 4k na 30 fps, 2,5k na 30 fps, 1440p na 60 fps, 1080 na 120 fps, 960p na 120 fps na 720p na 240 fps, na mgbakwunye na ikwe ka anyị rụọ gbawara na foto na 12 mpx.
Ọnụ ego mbụ nke igwefoto ihe omume 4 Yi bụ 179,99 euro, mana obere oge anyị nwere ike inweta ya naanị 129,99 euro.
Zụrụ YI 4K Action Camera
Lenovo Ideapad Y520 laptọọpụ
Firmlọ ọrụ Asia bụ Lenovo, chọkwara iso ndị ọzọ na-ere ahịa ma nye anyị ụdị Ideapad Y520, laptọọpụ nwere ihuenyo 15,6 nke nwere mkpebi HD zuru oke, Intel Core i7 processor, 8 GB nke DDR4 RAM., 1 TB nke nchekwa gbakwunyere 1 128 GB Solid Hard Drive (SSD) na NVidia GeForce GTX 1050 eserese na 4 GB nke Ram. Ahụigodo ahụ bụ Spanish na nhazi QWERTY. N'ime anyị na-ahụ Windows 10 Home version.
Ọnụ ego mbụ nke Lenovo Ideapad Y520 bụ euro 1.199, mana rue njedebe nke taa anyị nwere ike zụta ya na Amazon maka naanị 899 euro.
Zụrụ Lenovo Ideapad Y520
Enkeeo 1080p untingchụ nta igwefoto
Igwefoto Enkeeo na-enye anyị mkpebi nke 12 mpx na mgbakwunye inye anyị ohere dekọọ vidiyo na ọdịyo na mkpebi HD zuru ezu. Igwefoto na-enye anyị nlele nlele nke ogo 120 na ekele maka ọhụụ abalị nke ọ na-agbakwunye, anyị nwere ike idekọ ma ọ bụ were foto kpamkpam n'ọchịchịrị na oke kachasị nke 20 mita.
Igwefoto ịchụ nta, ọbụlagodi na ha nwere aha nke nwere ike ịpụta na naanị ojiji ha bụ maka ịchụ nta, Ọ dịghị ma ọlị. Typesdị igwefoto ndị a dị mma maka nlekota oge niile onye gabigara n'ọnụ ụzọ ụlọ anyị ma ọ bụ ebe anyị na-arụzi ụgbọala, ma ọ bụrụ na nkịta anyị abanyela n'ime ụlọ ebe anyị achọghị ka ọ banye, iji chịkwaa mmegharị nke ụmụ anụmanụ site na mpaghara ụfọdụ akọwapụtara. site n'ọhịa, ịchọpụta onye na-aga friji kwa abalị ma rie ice cream ...
Igwefoto Enkeeo nwere ọnụahịa mgbe niile nke euro 59,99, mana obere oge anyị nwere ike zụta naanị 44,99 euro.
Zụta Enkeeo - 1080P HD untingchụ nta igwefoto
IMuto Mpụga Batrị
iMuto na-etinye anyị mkpofu taa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mpụga batrị anyị ama ma ọ bụ mbadamba, nke dị iche iche akọ na nha ka ekpuchi mkpa niile ndị ọrụ nwere ike ịnwe. Dị batrị a bụ ihe dị mkpa achọrọ, ọ bụrụ na anyị eburu ụzọ mara na anyị ga-enwe ụbọchị kpụ ọkụ n'ọnụ nke ekwentị ma ọ bụ mbadamba anyị, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị ga-eji ya were foto na vidiyo, yabụ ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ hapụ njem, ọ nwere ike ịbụ oge iji nweta ngwaọrụ nke ụdị a ugbu a na ha dị na ego dị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ihe Amazon na-adọrọ mmasị na-enye maka taa (18-01-2018)
Nintendo Labo, ọhụrụ si Japanese ebe kaadiboodu bụ protagonist